Ihowuliseyili Shift Gear liqhina mveliso - China Shift Gear liqhina Abavelisi, abaxhasi
Iibhodi zokutshintsha ezitshintshiweyo ezihlaziyiweyo ze-BMW x5 g05 i8 E36 E39 i-FandG chassis yesiphatho sobuntu besiphatho sokutshintsha
I-Mankaleilab ye-LED yokutshintsha kweqhina lizixhobo eziqaqambileyo. Ihlaziyelwe kwiqhina elingcono. Inenkangeleko emangalisayo kwaye ikhethekileyo kwi-BMW. Ukongeza, kulula ukuyifaka. Inkqubo yayo ephezulu yokufaka umbala ekubuyiseleni ukufakwa kombala wokuqala akuchaphazeli ukujikeleza kunye nokusetyenziswa okubalulekileyo. Ukumelana ne-Scaratch kunye nokunxiba ukuxhathisa ukukhanya kwonyango yenkunkuma. Itekhnoloji ekhethekileyo yokutshiza igcina umsebenzi wokuqala wokubhala ngesandla Isishwankathelo seFit Fitment: bmw Model: ...
Iyasebenza kwi-X5 G05 X7 G07 eNtsha ye-3 Series G20 G28 Crystal baffle 3 Series G20 28 Modified Carbon Gear Head Decoration
I-Mankaleilab crystal gear shift knob yicici le-crystal eliqaqambileyo. Iphuculelwe kwi-konb entle ukusuka kwiqhina eliqhelekileyo. Inenkangeleko ekhazimlayo yekristale kwaye ilungiselelwe ngokukodwa iBMW. Ukongeza, kulula ukuyifaka. Inkqubo yayo ephezulu yokufaka umbala ekubuyiseleni ukufakwa kombala wokuqala akuchaphazeli ukujikeleza kunye nokusetyenziswa okubalulekileyo. Ukumelana ne-Scaratch kunye nokunxiba unyango lokumelana nesipili. Itekhnoloji ekhethekileyo yokutshiza igcina i-functi yokubhala ngesandla ...
ICyristar gear shift knob lever handle car accesories interior auto parts parts universal for x5 x6 new 3 series 5 series
Isishwankathelo seFit Fitment: bmw Model: 1 Series, 6 Gran Turismo, X3, Z4, I8, X4, X5, 5 Series Gran Turismo, 2 Series Year: 2013-2016, 2018-2019, 2013-2017, 2013-2016, 2014 -2017, 2018-2019, 2014-2016, 2013-2016, 2012-2016, 2014-2016 Indawo yokuQala: Zhejiang, China Igama leBrand: MANKALEILAB Inombolo yemodeli: ICrystal Gear knob Igama leMveliso: Car Gear Shift Cover Item Amagama aphambili: Shift Izinto eziGubungelayo zeGiya: Umbala we-ABS: Imodeli yeSilivere yeMoto: Uhlobo lweModeli yoBume boBonke: Ubungakanani beZinto zangaphakathi: ...
Iyasebenza kwimoto entsha 3 uthotho f30 f31 f34 f35 uyilo olutsha lwekristal shift lever ngomgangatho ophezulu weBMW
Esebenzayo Imoto eNtsha bmw X3, bmw f30 Uyilo olutsha lweCrystal shift lever enomgangatho ophezulu weBMW
Iyasebenza kwimoto entsha 4 uthotho f32 f33 f36 uyilo olutsha lwekristal shift lever enomgangatho ophezulu weBMW
Iyasebenza kwimoto entsha 2013-2020 uyilo olutsha lwekristal shift lever enomgangatho ophezulu weBMW
Iyasebenza kwimoto entsha 3 uthotho F10 G20 G38 uyilo olutsha lwekristal shift lever enomgangatho ophezulu weBMW
Iyasebenza kwimoto entsha 6 uthotho F12 F13 F06 uyilo olutsha lwekristal shift lever enomgangatho ophezulu weBMW
Iyasebenza kwimoto entsha 8 uthotho G14 G15 G16 i8 I12 I15 uyilo olutsha lwekristal shift lever ngomgangatho ophezulu weBMW